トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Twin Seoul sigaba isigaba sesihlanu kwaye 'ukuya' into
Xa nqanaba yokwenene ukuya oosiyazi [3500 yen mahala apreyizali] ukuba ukuze ufumane indlela
umphefumlo iwele ibuyiselwe kwenye umphefumlo yakuqala kwakhona, isigaba sesihlanu ke kanye hamba sokuthimba ukuya kwelinye iqela, yabo mhlawumbi ixesha sokuhlola ngokwayo.
abantu ababini umdla omnye komnye ngamandla, kubi efanayo ngoxa mna ndiyamthanda kakhulu, iimbaleki babaleka bubudlelwane, zikwasukela asukele oko, oko urhulumente apho inqondo kuphazanyiswa, ngokulandelelana.
Nangona kunjalo, ukuze umphefumlo liwele kwakhona nazo, ibotshelelwe ngamandla, kuya kufuneka omnye kubulisa Awakening ngokomoya. Ukuba ukuvuka, kufuneka ukucima iingxaki ebekwe kwi ngalinye enye ngeli xesha.
Ngaloo msebenzi, elahliweyo le ego lowo wambetha umchasi baze ngokwam, kuyimfuneko ukuba kunikezela phezu phulo ngamnye komphefumlo. Yintoni eyenza oko, ukhululekile kuwo uthando olunemiqathango elidlulileyo, singakwazi kugalela uthando olungenamiqathango. In
yesihlanu Inqanaba iwele Seoul kanti zikwasukela yi
? 2 ixesha labo nobudlelwane ngenyhek ngokomoya enye kwenye ukuze ashiywe kuThixo, ngokuba ubudlelwane ezimbini bonke abaseleyo kuThixo kuwe. Nitshabalalisane ngaphandle kunye umgama, uya zijonge nganye iingxaki, kodwa uThixo ngoko ndivumele kwakhona nithathele kunye nendalo xa ufikelele Awakening ngokomoya omnye komnye.
Noko ke, kanye xa imbaleki ukuba ulinde ngomonde uthi ukuba babuyele kulo zikwasukela yokuqala, hayi akunjalo. Zikwasukela wake washiywa ke othanda imbaleki, kufuneka ukuba ahlolisise oko intliziyo yam kwaye umphefumlo ufuna ngokwenene.
kunye iimbaleki, liya kuzama ukuya ukulibala ukukhumbula uloyiko kwi indlela enzulu zikwasukela, ndiye ndaqonda ukuba ukufuna zikwasukela kwinqanaba umphefumlo, siya mabanikezele uthando ongenalo Koe.
? Abantu 2 Zikwasukela ukuba sele abalekela
imbaleki ukuze silandele zazivelela ngendlela efanayo, iimbaleki kulinda ukubuya kwakhona wabo wokuqala, kodwa kuyimfuneko ukwandisa Nijonge ngokwam okwangoku. Nakuba kunjalo, ukwenzela ukuba ngokwaneleyo ukukhulisa babo, abanye abantu bacinga ayikwazi kumanywa kunye imbaleki kakhulu.
Noko ke, abantu ababini umphefumlo ngamawele, siza kuqhubeka nokuguquguquka ngendlela efanayo ngalinye. Ngamanye amazwi, lowo ngelo xesha ukubingelela Awakening ngokomoya ukwandisa ngokwakho ngokwaneleyo, kufuneka apho, ukuba bayeke kwenzeka. Ngamanye amazwi, ngoxa nga sayohlala iimbaleki, mna ngokwam ukuba elinye iqela nalo ekulungiseleleni lwanele.
uthando olungenamiqathango Makhe ngayo ngeenxa zonke
kwinqanaba eyesihlanu nje uyazi uthando olungenamiqathango ukuba agalelwa umphefumlo komba lowo, bathulula kwakhona sinomsa obukhulu abantu, bonke kwakhona uya kucelwa ukuba ukuxolela. Le uthando, kungekudala uza kuba kunokwenzeka ukuba livakale komphefumlo amawele. Ngaphandle ngxama
, esazi ukuba abantu ababini kuba imfuno emizini yabo kwinqanaba umphefumlo ngalinye, kufuneka ukuba kwakhona nithathele ndawonye abantu ababini uThixo.
Kwinqanaba yesihlanu, hayi nje kuphela kweli uthando olungenamiqathango ukuba agalelwa umphefumlo komba lowo, bathulula kwakhona sinomsa ngokunzulu ebantwini ngeenxa zonke, nabo kuya kufuneka ukuba ukuxolela bonke. Le uthando, kungekudala uza kuba kunokwenzeka ukuba livakale komphefumlo amawele. Ngaphandle ngxama